Mgbe afọ 5 gachara, ụdị nnukwu 2.0 nke ADW Launcher | Gam akporosis
ADW Launcher 2.0 malitere mgbe afọ 5 gachara n'amaghị ihe ọ bụla gbasara ya
Ihe ngosi ADW nwere nnukwu ebe ya na akụkọ ntolite gam akporo ke ntọn̄ọ ntọn̄ọ isua esie. Ezigbo ihe eji egwu ngwa nke, maka oge ndị ahụ, rụrụ ọfụma ma were ya dịka otu n'ime ọkacha mmasị maka ọtụtụ ndị ọrụ. Ihe ngosi, ọsọ na nhọrọ nhazi mere ọtụtụ ndị dabere na ụbọchị ha kwa ụbọchị, ya na ndị nna ochie a, ịmalite WhatsApp, ngwa egwu ma ọ bụ mepee QuickPic, nke bụ naanị ụzọ iji nwee ụlọ ngosi ihe osise dị mma. ADW Launcher na-efunahụ ebe ya n'ihi ọganihu nke gam akporo n'onwe ya na mbata nke amaghị m ole ndị na-agba ọhụụ ọhụrụ ghọrọ ndị ọkacha mmasị maka ọtụtụ.
Ihe dị ịtụnanya gbasara ADW Launcher bụ na na 2011 mmepe nke ụdị 2.0 bidoro mgbe ọ banyere na mkpụrụ akụkụ alpha, mana ka o siri dị, ọ gwụbeghị. Onye okike bilitere site na onweghi ebe afọ ise gachara mechaa weta 2.0 nke ADW Launcher gaa na Playlọ Ahịa Google. Versiondị magburu onwe ya nke dị na steeti beta na na ọtụtụ ndị nwere ike ọ gaghị abụ ngọpụ zuru oke iji dochie Nova Launcher, nke emelitere otu ọnwa gara aga na ọnọdụ abalị, ma ọ bụ nke Google, mana ọ na-enye ahụmịhe onye ọrụ pụrụ iche nwere agba na ngwa ngwa na-ahazi ngwa ngwa. Vidio a tọhapụrụ na-egosi atụmatụ ya niile, mana anyị ga-enyocha ha.
1 Oge ka mma karịa ka ị ghara ime
2 A launcher na-ada na ịhụnanya na
Oge ka mma karịa ka ị ghara ime
Oge mbụ ị malitere ADW Launcher, ndị nnukwu akara ngosi ma desktọọpụ na ebe nnabata ngwa ngwa na ihe bụ ọmarịcha arụmọrụ mgbe mmadụ na-agagharị na ngalaba ya dị iche iche.
Ihe ọzọ ị na-achọpụta bụ na ADW Launcher 2.0 nwere a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke nhọrọ maka nhazi nke akụkụ niile nke onye na-ebupụta ihe dịka drawer ngwa, akara ngosi, isiokwu ndị nwere ike ịhazi, folda, nkwado maka ndebiri ADW, mmegharị aka na ọnụ ọgụgụ dị mma nke nhọrọ ị ga-ahụ mgbe ị gafere mmiri site na nhazi ya. Akụkụ a dị ezigbo mkpa iji nwee ike ịkọwa ụdị onwe nke otu maka ngwa kachasị mkpa nke enwere ike itinye na smartphone.
Ya mere, anyị ga-aghọta na onye nrụpụta ahapụbeghị 2.0 ọsọ ọsọ, mana emewo ka ịhụnanya na mgbalị zuru ezu iji wetara anyị nnukwu ahụmịhe dịka onye ncha. Anyị na-eche ihu otu n'ime ndị mmepe ahụ malitere ụzọ maka gam akporo na nke a bụ nke a na-ahụ anya na nooks na crannies nke ngwa ahụ, yabụ ọ bụrụ na ị na-achọ onye nwere mmụọ ahụ, ADW Launcher 2.0 nwere ya.
A launcher na-ada na ịhụnanya na
ADW Launcher 2.0 nwere ihe bu desktọọpụ ya na nnukwu akara ngosi ndị ahụ, drawer draịva na-agagharị na ihu na nhazi nke ihuenyo site na ịpị ogologo oge na desktọọpụ, dị ka isi anyụike atọ ụlọ niile nhọrọ ịhazi gị.
Detailsfọdụ nkọwa dịka wijetị etinye na ụfọdụ yi kaadị na nke ahụ na-enye anyị ohere iji ha nweta ihu igwe dị elu, nhazi desktọọpụ na nhụchalụ nke ọnụọgụ niile anyị gbanwere, ma ọ bụ, n'otu ụzọ ahụ, ikike ịgbanwe ọdịdị nke akara ngosi, yana iji nlele.
E wezụga mbipute n'efu, ADW Launcher nwere a adịchaghị mbipute maka ego nke € 4,19 nke na-enye gị ohere ịnweta nhọrọ ndị a:
More ntụgharị maka desktọọpụ
Stylesdị ndị ọzọ maka drawer ngwa
Nzacha na abụ maka akara ngosi
Unlimited wijetị wijetị
Ike itinye wijetị ọ bụla na ogwe elu (ebe ebe nyocha ahụ dị)
Dochie ogwe aka ma ọ bụ ọdụ na wijetị ọ bụla
Ị nwere ike nweta beta site ADW blog ma ọ bụ budata APK dị n'okpuru. E tinyekwala ihe mgbakwunye ọhụrụ maka Dropbox, Draịvụ, OneDrive na Igbe, na mgbakwunye ndị adịlarị na Storelọ Ahịa Play.
Budata ngwa nke ADW Launcher 2.0
ADW Mgbatị Pack
Ihe ngosi ADW 2
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » ADW Launcher 2.0 malitere mgbe afọ 5 gachara n'amaghị ihe ọ bụla gbasara ya